Perm kunalokho edolobheni ezithakazelisayo elisendaweni empumalanga ingxenye European Russian Federation. Lihlala abantu abangaphezu kuka-1 million, ngakho-ke usebenza ezihlukahlukene zokudla, amathilomu, nemishayo, kuma-nightclub kanye izikhungo efanayo. Namuhla sizoxoxa ezindaweni ezithakazelisayo ukuze badle, okuyinto ingenye best edolobheni futhi has a lot of ukuthandwa.
Indawo yokudlela "Partizan" (Perm, Russia) - indawo eyingqayizivele ngempela lapho umuntu Ungazama ezihlukahlukene izitsha walungisa ngokusho zokupheka zakudala ngothando kusuka chef. Manje sizoba kafushane kulesi sikhungo, thola izibuyekezo ngakho, xoxa ngemininingwane imenyu, kanye neminye imininingwane ewusizo. Masiqale!
Lesi sakhiwo kuyinto yesimanje yokudlela score isilinganiso okuyinto uyahluka ruble 1200. Futhi uzinake ukuthi lokhu cafe inikeza inkonzo ukulethwa kokudla. Ngaphezu kwalokho, kuyo yonke indawo yokudlela okusebenza esihle ngesivinini Inthanethi engenantambo. Lapha ungakwazi oda kwasemini ibhizinisi, futhi basigcwalise une ikhadi ithuba. Njengoba for cuisine, kufeza focus kuphela European. Kuyinto iIgama indawo Komsomolsk Avenue (ikhaya lokuqala) futhi usebenza ku-schedule elandelayo: ngeSonto uLwesine - kusukela emini kuze kube phakathi kwamabili, ngoLwesihlanu nangoMgqibelo - kusukela emini kuze 2 ekuseni.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi kule cafe, ungakwazi ukubamba noma yimuphi umcimbi esiyisikhumbuzo, kodwa lokhu kufanele mathupha nixoxe yonke imibuzo yakho nge nomphathi.
Kwimenyu enkulu kulokhu imelelwa ezihlukahlukene izitsha orientation European. Ngakho, yokudlela "Partizan" (Komsomol lemininingwane, 1) inikeza amakhasimende ayo ukunambitha tinhlobo letehlukene Burgers, ukudla okulula, inyama amakhono kusukela Smokehouse ethu, amasaladi, izitsha ezenziwe nge kwasolwandle, ukudla okushisayo, ukudla on the hlupha, steaks, izinkampani ezinkulu , nama-dessert, ikhethelo lemonades, iziphuzo ezibandayo, ayo fresh, itiye kanye ezihlukahlukene izinhlobo zophuzo oludakayo.
Uma uthanda nama-dessert, uqaphele ukuthi le sayithi sonkana kubo mncane impela. Indawo yokudlela "Partizan" (Komsomol lemininingwane) inikeza amakhasimende ayo khekhe ukunambitheka isignesha, enziwe amajikijolo fresh futhi raspberry sauce. Izindleko zalesi isidlo ezithakazelisayo kuyinto ruble 260, futhi wayinika 190 amagremu. Ungase futhi oda strudel nge-apula, babesebenza Ketha of ice cream. Kulokhu, intengo dessert kuyinto ruble 230.
Chocolate fondant ngoba ruble 260. futhi wakhonza a Ketha of ice cream. Kodwa tiramisu kuyinto dessert zakudala, obiza ruble 240. Ngesikhathi esifanayo ube nethuba ukunambitha ikhekhe ngokuthi "Yabashokobezi" in ruble 230 nje., Futhi bakhonza lokhu dish 250 amagremu.
Uma ufuna oda bese uzama into nhlobo, kufanele nakanjani sinake ayisikhilimu, kuphekwe emnyama namafutha omnqumo. Lena isidlo eliyingqayizivele futhi zasendle ngempela kubiza ruble angu-210.
Kulokhu, kukhethwa ngaphezulu ezimbalwa, ngoba ungakwazi oda ingulube izimbambo e nokucwebezela okuzothile kathathu, wakhonza isaladi amazambane. Kukhona le isidlo nenhle kuyinto ruble 540., Futhi ukunambitheka kwako kuyoba iyingqayizivele ngempela. Ngesikhathi esifanayo wena unethuba ukuzama izindondo, kuphekwe yengulube tenderloin. Lokhu wobuciko Culinary wakhonza nge sauce eyenziwe ukhilimu kanye amakhowe. ukudla izindleko ruble 420.
Wena ubuye ube ithuba zama yengulube iqupha okuzokwenziwa bafaka noma uju-lwesinaphi sauce noma ocwebezelayo. Kuyinto ephawulekayo ukuthi lo mshumayeli isidlo wakhonza nge inyama ngibhema, amajikijolo neklabishi, futhi kubiza 750 ruble. By endleleni, uqaphele ukuthi mass ingqikithi Kulokhu Culinary elilingana 1 kilogram.
Uma ufika yokudlela "Partizan" (Perm), nje ukuba sidle, qiniseka oda isanqante fresh, garlic croutons kanye isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ngenxa ruble 220. Futhi ungazama inhlanzi izibopho ruble 200, wakhonza ne anyanisi kanye sauce. By the way, salmon tartar kule site iIgama kubiza ruble 350 kuphela. By the way, indishi eyenziwe yenkomo, ngentengo ukuthi ilingana ruble 340.
Indawo yokudlela "Partizan" (Perm) ingenye iIgama best emzini, ngakho baningi mnandi kakhulu, futhi inzuzo wanezela kubhekwa ukuthi amanani ziyafinyeleleka. Ekugcineni, siphawula ukuthi in ruble 290 nje, ungazama pate okuzenzela, kuphekwe yenkomo kwesibindi wakhonza onion ujamu kanye berry compote.
Ukuthi amakhasimende ucabanga?
Sesiphawulile ukuthi yokudlela "Partizan" (Perm) ingenye izikhungo best of edolobheni, ngakho ziningi amakhasimende. Izivakashi lesi sikhala iIgama wanelisekile ngokuphelele nezinga eliphezulu of service kanye namanani entengo ezinengqondo.
Abaningi bathi inyama yokudlela "Partizan" has a imenyu sihlanganise indawo ebanzi kakhulu, nakuba kukhona ngokucacile hhayi kophudingi ngokwanele. Ingaphakathi le yokudlela yesimanje, ngakho ngokuqinisekile kumelwe ngandlela-thile uze lapha.
Ngokuvamile, njengoba ungabona, "Partisan" yokudlela Izibuyekezo has cishe njalo omuhle, ngoba lapha nsuku zonke ngifuna amakhasimende amasha. Woza kule ndawo iIgama futhi bachitha isikhathi esikhulu. Bon appétit!
Indlela yokukhulisa ingane: ukukhulisa, ubudlelwano, ukuqeqeshwa, impilo
I-Myositis: iyini nokuthi ingayiphatha kanjani
Intrauterine Mirena: izici umuthi
Isikhathi sokuqiniseka. Iyini futhi ingasetshenziswa kanjani?
Njengoba lodonga glue ezisemagumbini. zikhathi ezinzima umsebenzi elula